Tenin'ny mpitandrina noho ny faha-10 taona nitandremana – FJKM Ambavahadimitafo Tenin'ny mpitandrina noho ny faha-10 taona nitandremana |
Tenin'ny mpitandrina noho ny faha-10 taona nitandremana
Faha-10 taona : 1996 - 2006
Noho ny fitantanan’Andriamanitra ny fiainan’ny Fiangonana Ambavahadimitafo dia feno 10 taona ny niarahany niasa tamin ‘ny Mpitandrina RAKOTOHARINTSIFA Andrianjatovo mivady sy ny zanany (1996-2006) teto amin ‘ny FJKM Ambavahadimitafo.
Raha tsiahivina fohy ny zavatra niaraha-nizara teo amin ‘ny asan ‘Andriamanitra dia ireto mikasika ny fitaizam-panahy ireto ihany no andeha hambara :
(a) – nohamafisina ny fandalinam-pinoana lalim-paka sy mitohy ao anatin ‘ny fanompoam-pivavahana sy any amin ‘ny fotoanan ‘ny sampana;
(b) – nentanina sy notohanana tamin ‘ny fianarana Soratra masina sy tamin ‘ny torohevitra pratika ny Loholona sy ny Diakônina mba hanatsarany ny fanompoany;
(c) – nampaherezina ny sampana mitaiza ankizy sy tanora efa nijoro mba ho marin-toerana ary nampirisihina ny fijoroan ‘ny sampana vaovao;
(d) – napetraka ho fandaharan ‘asan ‘ny fiangonana isan-taona ny Tafika Masina, izay iandraiketan ‘ny Vaomieran ‘ny A.F.F(Asa Fitoriana ny Filazantsara) ;
(e) – nosokafana ho an ‘ny rehetra ny fianarana baiboly isaky ny Alakamisy;
(f) – najoro ny Tetik ‘Asa ho fanohanana ireo olona na fianakaviana maniry hiala amin ‘ny fidorohana na te-hampiana amin ‘ny fiatrehana izany. Ankoatra izany moa dia nisy ny fanajariana ny fananan ‘ny fiangonana sy ny fanavaozana ny fanaka izay niarahan ‘ny vahoakan ‘Andriamanitra nanatanteraka tamin ‘ny fahazotoana sy ny fahalalahan-tànana tokoa, na dia tamin ‘ny andro sarotra aza no namitana izany.
Hotohizana hatrany izany fomba fiasa izany isaky ny vanim-potoana mahamety azy. Raha ny 10 taona manaraka no banjinina, dia ireto lafim-piainana ireto no hanaovana ezaka manokana:
(1) fanamafisana orina ny tokantrano sy ny fianakaviana kristianina mba hanjary sehatra ibeazana amin ‘ny finoana sy ivelaran ‘ny maha-olona;
(2) fametrahana Tetik ‘asa Fitoriana sy ny fitaizana ny tanora kristianina eto amin ‘ny fitandremana Ny firaisan ‘kina sy ny fifankatiavana miorina amin ‘ny fanarahana an ‘i Kristy ihany anefa no hahavitana ireo fikasana ireo araka ny toe-panahy ankasitrahan ‘Andriamanitra. Dia hampitomboina ho antsika mandrakariva anie ny fahasoavan ‘ny Tompo! Ambavahadimitafo, 3 septambra 2006